पानी चलाउँदा किन यसरी चाउरिन्छ हात-खुट्टा ? यस्तो रहेछ कारण – List Khabar
Home / स्वास्थ्य / पानी चलाउँदा किन यसरी चाउरिन्छ हात-खुट्टा ? यस्तो रहेछ कारण
पानी चलाउँदा किन यसरी चाउरिन्छ हात-खुट्टा ? यस्तो रहेछ कारण
admin August 13, 2021 स्वास्थ्य Leaveacomment 124 Views
नुहाए’पछि हाम्रो शरिर’को केही हिस्सा’को छाला खुम्चिने गर्छ। हात, हत्केला, औला’को छाला धेरै बेर पानीमा रहँदा खुम्चेर चाउ’रिएझै हुन्छ। आखिर यसको कारण के हो ? – केही व्यक्ति बायोकेमिकल प्रतिक्रियाको कारण यस्तो हुने बताउँछन्। पानीमा रहँदा हाम्रो छालाबाट सामान्य भन्दा अधिक कोष बाहिर निस्कन्छन्। जसले गर्दा छाला खुम्चिन पुग्छ। तर वैज्ञानिक भन्छन्, यो केवल ओस्मोसिस मात्र होइन।
वैज्ञानिकले पत्ता लगाएका छन् कि छाला’को जुन हिस्सा चाउरी परेको छ, यदि त्य’हाँको केही नसा काटिदिने हो भने त्यसरी चाउरी पर्दैन। यसको मतलब चाउरी परेको छाला यो देखा’उछ कि हाम्रो स्नायु प्रणा’ली बिल्कुल ठिक काम गरिरहेको छ।अमेरिकी वैज्ञा’निक मार्क चान्गिजी भन्छन् कि हाम्रो शरिर बदलियको वातावरण अनु’सार आफु’लाई पनि परिव’र्तन गर्दछ।
पानीमा छाला चाउरी पर्नु पनि त्यहि हो, कि हामी चीजहरु’लाई ठिक ढंगले समा’उन सकौं। सन् २०११ मा मार्केले एक अनुसन्धान’को क्रममा यस्तो विशेषता बाँदरमा पनि भेटेका थिए।यसको एउटै अर्थ हुन्छ कि पानी’मा हा’म्रो पकड बलियो होस्। ब्रिटेनमा सन् २०१३ मा भएको एक प्रयोग यो पनि देखा’यो कि भिजे’को हातले पानी भित्र चीजहरु’लाई यता-उता छिटो छिटो गर्न सकिन्छ। सुख्खा हातले यहि काम गर्न बढी समय लाग्छ।
तर एक वर्ष पछि जर्म:नीमा यहि प्रयोग फेरी भयो जु’नमा नतिजा उल्टो आयो। नजि’ता आयो कि भिजे’को हात र सुख्खा’ हातले काम गर्दा कुनै फरक हुँदैन। भिजेको खुट्टा’ले भुइँमा टेक्दा चिप्लिने बढी डर हुन्छ, कतै समात्न खोज्दा चिप्लो भएर समात्न सकिन्न। तर कम्तिमा ५ मिनेट पानीमा भिजे’को हात वा खुट्टामा पर्ने चाउरीको कारण भने त्यस्तो चिप्लोप’ना कम हुन्छ। मार्क भिजे’को चाउरी आफ्नै शरिर धान्न उपयोगी हुने ठान्छन् । – एजेन्सी
Previous अत्यावश्यबाहेकका सबै सेवा बन्द हुने गरी आजदेखि भदौ ५ गते मध्यरातसम्मलाई कडा निषेधाज्ञा
Next डिभोर्स गरेकी युवतीसंग प्रेम परेका युवक जब तड्पी तड्पी…….